सोल्टी होटेल स्थापना को कथा | गृहपृष्ठ
Home बजार सोल्टी होटेल स्थापना को कथा
सोल्टी होटेल स्थापना को कथा
सोल्टी होटल लि
नेपालमा आएको पहिलो व्यवस्थित पर्यटक समूह ‘कक्स एण्ड किङ’ थियो र दोस्रो ‘अमेरिकन एक्सप्रेस’ । त्यो बेला पर्यटनको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका मात्र थियो । एउटा समूह गएर अर्को आउने भए पनि मौसमी खालका पर्यटक आउँथे । मनसुनमा कोही पनि आउँदैनथे ।
सोल्टी होटल स्थापनाको समयमा म पढ्दै थिएँ । मेरा एक जना नातेदार चूडाशमशेरको होटल स्थापना गर्ने विचार रहेछ । तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालय र मेरो दिज्युलाई मनाएपछि होटल स्थापनाको सोचले मूर्तरूप लियो । तर, समस्या के भने होटलको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीको राम्रो ज्ञान कसैलाई थिएन । त्यो र आर्थिक कारणले परियोजना अड्किएको रहेछ । उहाँले हरेक कामको पनि जिम्मा आफैले लिनुभएको थियोः होटलको डिजाइनको, सञ्चालनको । तर, त्यसको अनुभव उहाँलाई थिएन । म, केबी सिंहलगायतले सोल्टीमा लगानी गर्ने भएपछि यसलाई नयाँ तरीकाबाट फेरि शुरू गरियो । यहाँबाट उद्योग शुरू भयो । सिंहले अशोका होटलमा १८ महीना तालीम गरेकाले उनले होटल व्यवसायलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । मैले भनिसकेँ, उद्योगमा कर्जा लिने, तिर्ने प्रक्रियाका साथै आधुनिक फाइनान्सिङ हुनुपर्छ । मार्केटिङ र सेल्स हुनुपर्छ । त्यतिबेला सोल्टी र अन्नपूर्ण होटललाई नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ऋण सहयोग गरेको थियो र निगमका प्रमुख भरतबहादुर प्रधान थिए । यसमा अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड)को सहयोग भएकाले त्यहाँ अमेरिकी सल्लाहकार पनि थिए ।
यसरी होटल व्यवसाय विस्तार हुँदै गएपछि रामशङ्कर श्रेष्ठले शङ्कर होटल शुरू गरे । यो होटल कर्जा लिएर होइन, घर भाडामा लिएर शुरू भएको हो । नेपालमा होटल एशोसिएशनको स्थापना हुँदा सोल्टी, अन्नपूर्ण, रोयल, शङ्कर, स्नोल्याण्ड, पारस र कोरोनेशन गरी सात सदस्य थिए । स्नोल्याण्ड चाल्र्स मेण्डिसका पिताले सञ्चालन गर्थे । वास्तवमा मेण्डिसले बोरिसलेभन्दा पहिले नै नेपालमा होटल खोलेका हुन् । मेण्डिसले लाजिम्पाटमा नेपालकै पहिलो अटोमोबाइल कारखानासँगै होटल खोलेका थिए । सेतो दरबारभित्र रहेको चाइनिज रेस्टुराँको साथमा पनि १४ कोठाको होटल सञ्चालन गरिएको थियो । एक चिनियाँ महिलाले त्यसलाई चलाउँथिन् ।
रोयल होटल होटल एशोसिएशनमा सदस्य भए पनि बोरिसले एशोसिएसनमा खास रुचि देखाएनन् । शुरूमा त नेपाली होटल व्यवसायमा रोयल होटलको एकाधिकार जस्तै थियो । जो पर्वतारोही आए पनि त्यहीँ बस्थे । ‘याक एण्ड यती’ नाममा बार शुरू गरेको पनि बोरिसले नै हो । पछि यो होटलका रूपमा विकसित भयो । पर्यटनको सम्भावना विस्तार बोरिसले पर्वतारोहणमा पनि धेरै योगदान गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक संस्थागत पर्यटक बोरिसले ल्याएका हुन् । ‘लिभिङ द माउण्टेनरिङ’मार्फत । मुख्य रूपमा अमेरिका र पछि यूरोपबाट उनले पर्यटक भियभयाउँथे । नेपालमा आएको पहिलो व्यवस्थित पर्यटक समूह ‘कक्स एण्ड किङ्ग’ थियो र दोस्रो ‘अमेरिकन एक्सप्रेस’ । त्यो बेला पर्यटनको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका मात्र थियो । एउटा समूह गएर अर्को आउने भए पनि मौसमी खालका पर्यटक आउँथे । मनसुनमा कोही पनि आउँदैनथे । नेपाल अझै संस्थागत (अर्गनाइज्ड) पर्यटन क्षेत्रभित्र परिसकेको थिएन । तर, विस्तारै नेपाल ‘साङ्ग्रिला’ भनेर र एभरेष्ट तथा माउण्टेनरिङका नामले चिनिन थाल्यो । फाट्टफुट्ट एक–दुई समूहबाहेक व्यक्तिगत पर्यटक पनि आउन थाले । यो सन् १९६० को दशकभन्दा पनि अघिको कुरा हो ।
त्यो बेला ट्राभल एजेन्सीको नामै थिएन । सन् १९६० को दशकपछि मात्र नेपालमा पर्यटनले गति लिन शुरू गरेको हो । नेपालमा स्थापना भएको पहिलो ट्राभल एजेन्सी ‘थर्ड आई’ हो । अधिराजकुमार बसुन्धरा तथा शारदा बुबाबाट भारतीय नागरिकसँगको संयुक्त लगानीमा यो एजेन्सी शुरू भएको थियो । भारतमा शारदा बुबाको साथीको ट्राभल एजेन्सी थियो, उसैसँग पार्टनरशिप गरेर ट्राभल एजेन्सी शुरू भएको हो । त्यो बेला सोझै होटलसँगको सम्पर्कका आधारमा पर्यटक आउँथे । मेरो विचारमा वार्षिक १–२ सयको हाराहारीमा आउँथे होला । त्यो बेला पर्यटनसम्बन्धी कुनै नीति पनि थिएन । यसपछि राजा महेन्द्रले अत्यन्तै गम्भीर भएर पर्यटनसम्बन्धी पहिलो र एक मात्र गुरुयोजनाको निर्माण गर्न निर्देशन दिइबक्स्यो । त्यो कति सालमा थियो भन्ने चाहिँ अहिले बिर्सें । त्यो गुरुयोजना बनाउन जर्मन सरकारले वित्तीय सहयोग गरेको थियो । यसका लागि अधिराजकुमार हिमालयको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको थियो । त्यसको मुख्य काम नै पर्यटनसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउनु थियो । यसको उपाध्यक्षमा अधिराजकुमार बसुन्धरा र सदस्यमा डा. तुलसी गिरीलाई राखिएको थियो । डा. गिरीको त्यतिबेला राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन, उनी प्रधानमन्त्री पदबाट हटिसकेका थिए ।
त्यो बोर्डमा निजीक्षेत्रबाट होटल एशोसिएशनको अध्यक्षको हिसाबले मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज तुलाधर सदस्य सचिव थिए । र अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र यातायात सचिवहरू श्री ५ को सरकारको तर्पmबाट सदस्य थिए । हुन त, त्योभन्दा २–३ वर्षअघि नै पर्यटन विभागको स्थापना भइसकेको थियो । डीबी प्रधान यसका प्रथम महानिर्देशक थिए । दार्जिलिङमा पढेका प्रधान पहिला भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका सचिव पनि भएका थिए । विभागकै नजिकमा रहेको भवनबाट पर्यटन बोर्डले काम गथ्र्यो । सरकारका अर्थ र यातायात तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बोर्डमा पदेन सदस्य थिए । यसले स्थापनाको डेढ वर्षमा नेपालको पर्यटनको विषयमा सरकार र जर्मनीलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनमा हरेक ५ वर्षमा संशोधन (पुनरवलोकन गर्दै अद्यावधिक) गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यस्तो कहिले पनि हुन सकेन । त्यो प्रतिवेदन बुझाएपछि पर्यटनका विषयमा सरकारलाई सुझाव र सल्लाह र यसको कार्यान्वयन भयो भएन अनुगमन (फलो अप) गर्नु बोर्डको काम थियो ।
तर, यसमा पनि विवाद थियो । डा. गिरिको भने शुरूदेखि नै यसमा फरक मत थियो । उनी बोर्डलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र बोर्डसँग कार्यकारी अधिकार रहनुपर्छ भन्ने विचारमा थिए । सचिवहरू त्यो दिन नचाहने । किनभने त्यो समयमा विभिन्न कारणले गर्दा यसो गर्न गाह्रो पनि थियो । मलाई अझै पनि पर्यटन बोर्ड शुरुआतदेखि नै बिग्रिएको थियो भन्ने लाग्छ । मेर विचारमा यसको काम प्रवद्र्धन मात्र हुनुपर्छ भन्ने थियो । किनभने कार्यकारी काम गर्न यसको क्षमताले धान्दैन । बोर्डले नै सबै पर्यटनको कार्यकारी काम गरे विभाग किन राख्ने, मन्त्रालय किन राख्ने ? मेरो फरक मत भएको यहीँनेर हो ।
यसपछि नेपालको पर्यटन विस्तारै उन्नतिको खुड्किलो उक्लिँदै गयो । नयाँ आशा र सम्भावना देखिन थाल्यो । त्यो बेला एकल व्यक्तिको प्रयासमा गरेको सोल्टी होटलको प्रवद्र्धनका कारण नै मलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मानिएको हो । बजेटसमेत नभएका बेला गरिएको यो ‘वन म्यान शो’ थियो । सोल्टी शुरू भएपछि पूर्ण व्यावसायिक रूपमा नै नभए पनि मार्केटिङको अवधारणा शुरू भएको थियो । अन्नपूर्णले पनि ‘हिल्टन’सँग सहकार्य ग¥यो । हामीले जति प्रवद्र्धन गरेका थियौं, त्यो आफ्नै पहलमा भएको थियो । तर पछि मैले अध्ययन गरेपछि संयुक्त प्रवद्र्धनको सम्भावना र आवश्यकता देखेँ र हामीले संयुक्त प्रवद्र्धनको कार्यक्रम शुरू ग¥यौं । यो ट्राभल एशोसिएशन, होटल एशोसिएशन, सरकार, नेपाल वायुसेवा निगमको संयुक्त प्रयास थियो । अरू निजीक्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिएको थियो । जस्तो ज्योति खन्ना । खन्नाले पनि सीता, मर्करी, टीसीआई आदिसँग मिलेर प्रवद्र्धन गरेका थिए । उनको पनि ठूलो योगदान छ नेपाली पर्यटनको श्रीवृद्धिमा । आज हामीले खन्नालाई बिर्सिसक्यौं । उनले पनि एक्लै पर्यटन व्यवसाय अघि बढाएका हुन् । त्यो बेलामा हाम्रो न बजेट थियो न अन्य प्राविधिक ज्ञान, खालि बोलीको भरमा प्रवद्र्धन गरिएको थियो । खन्ना अमेरिकन सोसाइटी अफ ट्राभल एजेण्ट (आष्टा)का सदस्य बने । आष्टाजस्ता संस्था अहिले खत्तम भइसके । सदस्यको हितमा सेवा पु¥याउन नसक्ने संस्था जीवित रहँदैनन् । समयसँगै परिवर्तन हुन नसक्ने व्यक्ति र संस्था पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । समयसँगै परिवर्तन हुन सकेकाले गर्दा नै प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) जीवित हो । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन समयको गतिमा गति मिलाउनै पर्छ । मेरो पनि पाटामा धेरै लामो अनुभव छ ।